Ukufundisa uMculo kubantwana: Orff, Kodaly, Suzuki, Dalcroze
Funda ezinye iindlela ezigqwesileyo zokufundisa uMculo kubantwana
Orff, Kodaly, Suzuki, kunye neDalcroze Izindlela
Kukho iindlela ezahlukeneyo ezisetyenziswa ngabafundisi xa kuziwa ekufundiseni umculo. Ezinye zeendlela ezifanelekileyo zokufundisa umculo womntwana ziyakwazi ukwakha inqwenela yolwazi lomntwana kwaye zifundise abantwana ngendlela abafunda ngayo, ngokufana nendlela umntwana afunda ngayo ulwimi lwazo lwasekhaya.
Indlela nganye yokufundisa ineenkqubo, ifilosofi engaphantsi kwinjongo kunye neenjongo ezicacileyo. Ezi ndlela sele zisetyenziselwa ixesha elide, ngoko zivavanywa ixesha kwaye zibonakaliswe ukuba ziphumelele. Enye into yokuba zonke ezi ndlela zifana nokokuba zifundisa abantwana ukuba bangayi kubaphulaphuli, kodwa khuthaza abantwana ukuba babe ngabadali kunye nabavelisi bomculo. Ezi ndlela zibandakanya umntwana ngokuthatha inxaxheba.
Ezi ndlela kunye nokuhluka kwazo zisetyenziswe ngabafundisi bomculo kwizifundo ezizimeleyo nakwiikolo zonke kwihlabathi jikelele. Nazi ezinye zeendlela ezidumeleyo zemfundo zomculo: Orff, Kodaly, Suzuki, kunye neDalcroze.
Glockenspiel Ifoto ngu-flamurai. Isakhiwo soLuntu lweSakhiwo kwi-Wikimedia Commons
I- Orff Schulwerk Indlela yindlela yokufundisa abantwana ngomculo owenza ingqondo nomzimba wabo ngomxube wokucula, ukudansa, ukusebenza, kunye nokusetyenziswa kwezixhobo zokudlala, njenge-xylophones, i-metallophones kunye ne-glockenspiels, ezaziwa ngokuba yi-Orff I-Instrumentarium.
Izifundo zinikezwa ngento yokudlala ekuncedeni abantwana ukuba bafunde kwinqanaba labo lokuqonda xa begxininisa ukuhlanganiswa kobugcisa kunye namabali, inkondlo, ukunyakaza, kunye nomdlalo.
Inkqubo encinci yeendlela ezi-ezine, indlela ye-Orff ifundisa umculo kumagatya amane: ukulingisa, ukuhlola, ukuphucula ukuhlaziywa nokubunjwa.
Kukho ukuqhubela kwendalo kwindlela ngaphambi kokufikelela kwizixhobo. Izwi liza kuqala ngokucula iingoma nokudala imibongo, kwaye kuza umqubuzana womzimba, njengokubetha, ukubetha, kunye nokuqhafaza. Ekugqibeleni kuza isixhobo, esibonwa njengomsebenzi owandisa umzimba. Kaninzi "
KwiNdlela ye-Kodaly, ukucula kugxininiswe njengesiseko somculo. Getty Images
Ifilosofi ye-Kodaly yeNdlela kukuba imfundo yomculo iyasebenza kakhulu xa iqala ekuqaleni kwaye wonke umntu unakho ukukwazi ukufunda nokubhala ngomculo ngokusetyenziswa kwabantu kwaye wabumba umculo wexabiso eliphezulu lobuciko.
Zoltan Kodaly wayengumqambi waseHungary. Indlela yakhe ilandelelana ngokulandelana nesakhiwo ngasinye kwisakhiwo sokugqibela. Ukubetha kugxininiswe njengesiseko somculo.
Uqala ngokubona-ukubona, ukuqonda iziqulatho ezisisiseko kunye nokufunda umxholo ngeendlela "zokubonisa ngesandla". Izibonakaliso zamandla zenza abantwana babone ngolu hlobo ulwalamano lwendawo phakathi kwamanqaku. Iimpawu-ngesandla zidibene ne-solfege singing (do-re-mi-fa-so-la-ti-do) izixhobo ekuculeni. I-Kodaly ikwaziwa kwakhona kwinkqubo yesalathisi yesiganeko ukufundisa ukubetha ngokukhawuleza , itempo kunye nemitha.
Ngezifundo ezidibeneyo, umfundi ngokuqhelekileyo uqhubela phambili ekufundeni ukufundwa kokubona nokuqeqeshwa kweendlebe.
Violin. Isakhiwo soLuntu lweSakhiwo kwi-Wikimedia Commons
I-Suzuki Method yindlela yokufumana imfundo yemimiselo eyaziswa eJapan kwaye kamva yafikelela eUnited States ngama-1960. Umkhwaphuli waseJapan uShinichi Suzuki walingisa indlela yakhe emva kokukwazi umntwana ukuba afunde ulwimi lwazo lwasekhaya. Wasebenzisa imigaqo-siseko yokufunyanwa kolwimi kwimfundo yomculo kwaye wabiza indlela yakhe yokuthetha ngolwimi lonina .
Ngokuphulaphula, ukuphindaphinda, ukukhumbula, ukwakha isigama-njengelwimi, umculo uba yinxalenye yomntwana. Ngale ndlela, ukubandakanya kwabazali kunceda kwimpumelelo yomntwana ngokukhuthaza, ukukhuthazwa kunye nenkxaso. Oku kubonakalisa uhlobo olufanayo lokubandakanyeka kwabazali olunceda umntwana ukuba afunde okusemthethweni ngolwimi lwazo lwasekhaya.
Ngokuqhelekileyo abazali bafunda isixhobo kunye nomntwana, besenza njengemimodeli yendima yomculo, nokugcina umoya wokufunda omhle ukuba umntwana aphumelele.
Nangona le ndlela yenzelwe okokuqala i-violin, ngoku isebenza kwezinye iilwimi kuquka ipiyano , igubhu, kunye negitare. Kaninzi "
Indlela yeDalcroze idibanisa umculo, ukunyakaza, ingqondo kunye nomzimba. Copyright 2008 Steve West (i-Digital Vision Collection)
Indlela yeDalcroze, eyaziwa nangokuthi iDalcroze Eurhythmics, yindlela enye esetyenziswe ootitshala ukufundisa iingcamango zomculo. U-Emile Jaques-Dalcroze, utitshala waseSwitzerland, wavelisa indlela yokufundisa isigqi, isakhiwo kunye nomculo ngokubonisa umculo kunye nokunyakaza.
I-Eurhythmic iqala ngokuqeqeshwa kwendlebe, okanye i-solfege, ukuphuhlisa indlebe yangaphakathi yomculo. Oku kwahlukana nokusetyenziswa kwe-Kodaly ye-solfege ngoxa ihlala idibene nokunyakaza.
Enye icandelo leendlela ezixhalabisa ukulungiswa, okubanceda abafundi bahlaziye ukuphendula kwabo ngokuzenzekelayo kunye nezimpendulo zomzimba.
Kwintliziyo yefilosofi ye-Dalcroze kukuba abantu bafunda ngakumbi xa befunda ngeengqondo ezininzi. I-Dalcroze ikholelwa ukuba umculo kufuneka ufundiswe ngetekisi, i-kinesthetic, inural and visual senses. Kaninzi "
Uluphi umjikelezo weeFifthi?
Yiyiphi i-Chamber Music?
Yintoni uMculo weChoral?
Funda iCandelo leCilongo
I-Mustangs e-Best Best ye-All Time
Smile ii-Quotes zokuPhucula ubuso bakho bobukhulu
Iifrimu ezigqwesileyo kwiPainter uVincent van Gogh
Yintoni Yomfanekiso Wezingane?
Izikolo zoBuchule beZiko loLawulo loLuntu
Imigaqo eqingqiweyo yeTable Tennis ye-Ping-Pong Beginners
Yintoni endimele ndiyenze noBawo Corapi Materials?
I-University State yase-Texas State GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Nceda! Inqwelo Yam I-Shakes and No Nob Kns!
Abameli beekholeji zeBloomfield
Iimvumi ezigqithisileyo zilandelwa nguLuciano Pavarotti
Iisiseko zeRodeo Bareback Riding
Yintoni iValence okanye iValency?
Indlela Yokuthi "Hayiyo IHarloween" ngesiJapan
Iimbali zeGrime kunye nezinye iinguqulelo
I-Gonzaga Yunivesithi ye-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Ukubhiyozelwa kweKuzalwa kweConfucius